शनिबार, असार १३, २०७७ १४:१६
काठमाडौं । तपाईंले प्रयोग गरिरहेको सिमकार्डमा अरु कसैले पहुँच बनाएर तपाईंको समाजिक सञ्जालदेखि बैंकिङ अकाउण्टसम्म पहुँच पायो भने के होला ? अझ त्यस्तो कार्य कुनै योजनाबद्ध रुपमा नै भएको रहेछ भने ?
सुरक्षित विकल्पको रुपमा सामाजिक सञ्जालदेखि ईमेल आईडीसम्ममा टू स्टेप भेरिफिकेसन प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी मान्यता विकास भइसकेको अहिलेको समयमा पक्कै पनि तपाईंले यस्तो कल्पना पनि गर्नुहुन्न होला ।
तर, केही समय अघि नेपालमा नै एउटा यस्तै घटना घटेको छ । जसले नेपालमा मोबाइल सेवा सुरुदेखि कायम रहेको नियमलाई नै फेर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिदियो ।
आयुष निधी तिवारी एक बैंकका कर्मचारी हुन् । कामको सिलसिलामा काठमाडौं बाहिर गएका उनी गत माघ २९ गते काठमाडौं फर्किंदै थिए । सिन्धुलीहुँदै काठमाडौं आइरहँदा उनी बेला बेलामा मोबाइलबाट कल गर्ने र इन्टरनेट चलाउने गरिरहेका थिए ।
झण्डै दुई घण्टा बितिसकेको थियो । उनी मैतिदेवी स्थित आफ्नो घरमा पुगिसकेको थिए । घरमा पुग्दा पनि मोबाइलमा नेटवर्क आएन । त्यसपछि भने उनलाई मोबाइलमै कुनै समस्या आयो कि भन्ने लाग्यो । सिमकार्ड निकालेर पुनः राखे । फोन अफ गरेर अन गरे ।
अहँ, केही गर्दा पनि नेटवर्क आएन । कतै मोबाइलको सिम स्लट नै बिग्रियो कि भनेर अर्को सिमकार्ड राखेर हेरे । तर त्यसमा भने हाल्नै बित्तिकै नेटवर्क आयो । यती भएपछि सिमकार्डमा नै समस्या आएको भन्नेमा उनी ढुक्क भए । त्यस दिन दिन ढल्किसकेको थियो ।
‘बेलुकाको करिब ५–६ बजेको थियो होला,’ आयुषलाई राम्रैसँग याद छ, ‘सोचें एक दुई दिनमा टेलिकमको कार्यालय गएर सिमकार्ड लिन्छु । साथमा अर्को सिमकार्ड भएकाले मलाई सम्पर्क गर्नकै लागि त्यस्तो कुनै हतारो पनि थिएन ।’
यसैबीच उनले आफ्नी केटी साथी (गर्लफ्रेण्ड) लाई अर्को फोनबाट सिम बिग्रिएको सुनाइसकेका थिए । यता उता गर्दै एक दुई घण्टा त्यसै बित्यो । खाना खाएर सुत्ने तरखर गरिरहेको बेला गर्ल फ्रेण्डको फोन आयो ।
‘मैले त्यस्तो हुनै नसक्ने भनेर जिद्दी गरेपछि उनले फेसबुकको पर्सनल म्यासेजहरुको स्क्रीन सट पठाइन्,’ आयुष सम्झिन्छन् ।
जति गरे पनि उनले ह्वाट्एप र भाइबर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकेनन् । अनी बल्ल आयुषलाई लाग्यो, सिमकार्ड बिग्रिएको नभएर अरु कसैले गलत रुपमा दुरुपयोग गरिरहेको छ ।
तर, स्पष्ट आधार बिना कसैलाई प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ पनि थिएन । त्यो दिन रात त्यसै बित्यो । उनी राम्रोसँग निदाउन पनि सकेनन् ।
उजुरी दर्ता भएसँगै प्राधिकरणले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लियो । प्राधिरणमा परेको उजुरीको छानविन गर्ने अधिकारीले पनि घटना गम्भीर रहेको टेकपानालाई सुनाए ।
आयुष भन्छन्, ‘मैले यो कुरा प्रहरीलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराएँ ।’ प्रहरीले आवश्यक थप अनुसन्धान थाल्यो । त्यस क्रममा पनि सबै गतिविधिमा श्यामकुमार नै संलग्न रहेको पुष्टी भयो ।
चाहेको खण्डमा श्यामकुमारले आयुषको बैंक अकाउण्टमा समेत पहुँच बनाउन सक्ने अवस्था संभावना थियो । आयुषले तत्कालै सिम निकाल्न सफल भएकाले त्यसो हुन पाएन ।
सिमकार्ड मार्फत बैंकमा समेत पहुँच बनाउनसक्ने भएकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रहरीले यो घटनालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएका थिए ।
त्यसैले उनले श्यामकुमारमाथि थप कारबाही अगाडि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि अब उपरान्त यस्तो काम नगर्ने सर्त सहितको कागज गराएर छाड्ने सहमती भयो र श्यामकुमारलाई छोडियो ।
यो घटना घटेसँगै पुनः श्यामकुमारले नै नगरेपनि अरुबाट समेत यस किसिमको घटना हुनसक्ने जोखिमको चाल नियामकले पायो ।
जसको प्रतिफल स्वरुप केही दिन अघि मात्र प्राधिकरणले सिमकार्ड बिक्रि गर्दा सक्कल नागरिकताको साथमा स्वयम् व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सेवाप्रदायकको नाममा परिपत्र जारी गरेको छ ।
भाग्यबश कुनै ठूलो दुर्घटना बिना नै ढिलै भए पनि सिमकार्ड लिन सकिने फितलो परिपाटीमा सुधार हुने बाटोमा गएको छ ।